Falanqaynta Horumarka Suuqa Qoriga Gunnada Guriga iyo Dibadda
Qoriga loo yaqaan 'Spray gun' waa nooc ka mid ah qalabka u adeegsada siideynta deg degga ah ee dareeraha ama hawo isku buuqsan sida awoodda. Waxaa loo isticmaali karaa dhismaha buufinta iyo waa aalad lama huraan ah habka qurxinta. Waxaa loo isticmaali karaa goobta lagu buufiyo gaadhiga, sida buufin ku sameynta baabuurta, buufinta OEM, buufinta tareenka, iwm. Waxaa kale oo loo isticmaali karaa buufinta birta, buufinta balaastikada, buufinta wax soo saarka alwaaxda, buufinta warshadaha, qalabka buufinta lagu buufiyo, Farshaxanka Farshaxanka iyo beeraha kale.
Qoryaha buufinku waxaa lagu sameeyay horumarinta warshadaha gawaarida iyo warshadaha daaha ka roon. Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo la horumarinaayo gawaarida caalamiga ah iyo warshadaha daboolida, warshadaha hubka lagu buufiyo ayaa sidoo kale horumarinaya, qaybaha wax soo saarka ayaa sii kordhaya, aagagga dalabka ayaa la ballaarinayaa, waxaana la soo bandhigayaa astaamaha soo socda:
Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Aasiya waa suuqyada macaamiisha ugu weyn. Baahida isticmaalka qoryaha buufin ayaa badanaa ka timaadda beeraha, baabuurta, wax soo saarka alwaaxda iyo waxsoosaarka warshadaha. Xaaladda isticmaalka ayaa xiriir weyn la leh horumarinta suuqa hoose. Laga soo bilaabo horumarinta suuqa hoose, waxaa la arki karaa in Waqooyiga Ameerika, Yurub iyo Aasiya ay yihiin suuqyada macaamiisha ugu weyn ee hawadeecada hawada adduunka, oo leh baahi weyn xagga isticmaalka.
Aasiya waa gobolka ugu weyn ee bixinta. Iyada oo la horumarinayo Suuqa qoriga buufin ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, Aasiya waxay si tartiib tartiib ah u noqotay aagga ugu weyn ee hubka lagu buufiyo adduunka iyada oo la adeegsanayo wareejinta warshadaha. Waxaa ka mid ah, Shiinaha ayaa ka faa'iideystay horumarka dhaqaalaha iyo horumarka degdegga ah ee warshadaha hubka buufin. Soosaarayaasha waaweyn ee adduunka ayaa si tartiib tartiib ah u aasaasay shirkado ay leeyihiin shirkado ama maalgashi shisheeye oo laga leeyahay Shiinaha si ay uga qeybqaataan wax soo saarka wax soo saarka isla markaana ay kor ugu qaadaan koritaanka degdegga ah ee saadka.
Tartanka u dhexeeya shirkadaha ganacsiga ayaa ah mid sii kordhaya. Waxa jira caqabado farsamo iyo dhaqaale xagga warshadaha hubka lagu buufiyo. Waqtigan xaadirka ah, magacyada ugu waaweyn ee qoryaha buufinka adduunka waxaa ka mid ah SATA German, German ananiste Iwata, kooxda farshaxanka finanka ee Mareykanka, kooxda guriga Mareykanka, ranjiyeynta Swiss Jinma, Jarmalka Wagner, Jucannak nooca Jabbaan, iwm Sanadihii la soo dhaafay, oo leh horumarinta warshadaha hubka buufiyo adduunka iyo horumarka tikniyoolajiyada, shirkado aad u tiro badan ayaa soo galaya warshadaha, taas oo ka dhigaysa tartanka suuqa inuu sii kordhayo fowdo.
Awoodda hal abuurka ayaa si joogto ah u fiicnaaneysa. Sanadihii la soo dhaafay, oo ay hogaaminayaan baahida suuqa iyo horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyadda, awooda hal abuurka ee warshadaha hubka buufinka adduunka ayaa si joogto ah u fiicnaanaya, noocyada wax soo saarka ee qoryaha buufinku si joogto ah ayey u fidinayaan, waxqabadka ayaa si joogto ah u hagaagaya, iyo suuqa wadaaga. ee qoryaha lagu buufiyo hawada, qoryaha tooska loo yaqaan, qoryaha lagu buufiyo deegaanka iyo alaabo kale ayaa sii kordhaya.
Bur-burka waa qalab hal abuur leh oo awood leh oo iskiis u istaagi kara inuu yahay bayaan farshaxan ama lagu dhex daro "sanduuqa aaladda" ee hal-abuurka ah si loo soo saaro qaabab hodan ah oo farsamooyin kaladuwan leh.
Waqtigan xaadirka ah, wadamada warshadaha shisheeye ee horumarsan ee bakeeriga ee nooca gawaarida iyo warshadaha samaynta guud ahaan waa heer aad u horumarsan, shirkadaha waaweyn ee adduunka ayaa inta badan ku urursan USA iyo Japan. Dhanka kale, shirkadaha shisheeye waxay leeyihiin qalab horumarsan, awood R&D adag, heerka farsamada ayaa kujira booska hogaaminta.
In kasta oo iibinta hawo-mareenka ay keentay fursado badan, kooxda daraasadda waxay ku talineysaa soo-galootiga cusub ee kaliya haysta lacag laakiin aan lahayn faa'iidooyin farsamo iyo taageero hoose, ha ku degdegin inay si dhakhso leh u galaan garoon-hawada.
Waqtiga boostada: Dec-24-2019
NO.289 DONGJIANG ROAD CUSUB HI-TECH, FENGHUA, NINGBO, ZHEJIANG, CHINA